Eebahaa baan ku dhaartaye waan warsanaynaa dhammaantood.
ee Muuji waxa lagu fari iskagana jeedso Mushrikiinta.
anagaa kaa kaafiyeyna kuwa jeesjeesa.
ee yeela Eebe Miciisa Ilaah kale wayna ogaan doonaan (waxa ku dhaca).
ee ku Tasbiixso mahadda Eebahaa ahawna kuwa Sujuuda.
Caabudna Eebahaa intay Yaqiintu kaaga timaaddo (Geeridu).